HomeWararka Maanta SomaliskaMigrationsverket-ka oo Cadeeyay Sharciga Dugsiga Sare iyo Sida Qofka uu ku heli karo Deganaanshaha Rasmiga
July 17, 2021 Wararka Maanta Somaliska, Wararka Sweden, Warka ugu akhriska badan 1
20 bisha oo naga xiga 3 maalin waxaa Sweden ka bilaabanaya Sharci Cusub kaasi oo si abadi ah looga isticmaalayo wadankan iyadoo meesha laga saarayo kuwa ku meel gaarka ahaa.
Hay’ada Laanta Socdaalka Sweden ee Migrationsvetketka oo ka jawaabeysa arimaha la xiriira sharcigan Cusub iyo waxa ka quseeya Sharciga Dugsiga sare ayaa faah-faahin ka bixisay xogtaasi.
ugu horeen inta aan warbixinta galin wixii su’al ah ee aad qabto nagu waydii qeybta hoose waan kaaga soo jawaabi doonaa hadii Alle ogolaado.
Sida ay hay’ada Laanta Socdaalka Sweden bogeeda ku sheegtay Qofka sharciga ku helaya Waxbarashada Dugsiga sare waxana noqonayaan sharuudihiisa cusub sidan.
ugu horeyn waxa qofka loo siiyay sharcigan Dugsi sare ahaan oo ah in uu ku jiro waxbarasho taasi ay ka dhigantahay in sharci la siiyo si waxbarashada u dhameesto.
Maxaa dhacaya Hadii Waxbarashada aan ka tago
Hadii aad ka tagto waxbarashada waxaa dib lagaaga ceshanayaa sharciga xataa hadii aad heysato shaqo dhaqaalo ahaan kugu filan ama shaqo joogta ah (fast job)
Sababta diidmada ayaa ah in sharcigan laguu siiyay in aad dhameesato Waxbarashada oo kaliya.
Hadii aan Waxbarashada dhameesto
hadii aad dhameesato waxbarashada markan shaqo feecan ayaa qabatay waxana dalban kartaa sharci joogta ah hadii aad heysato shaqo joogta ah hadii markaasi aadan shaqo heysan kiiskaga laanta socdaalka ayaa go’an ka gaareysa.
dad badan ayaa waxbarashada ka tagay markii ay heleen shaqo fadlan taasi ha sameen sababtoo ah adiga shaqo kuma quseyso lakin waad sameen kartaa in aad galin shaqeyso galina waxbarato waxaa dhici karta in sharciga joogta ah la siiyo marka uu kaa dhaco kaaga.
Sida aad socdaalka ay shaacisay Sharcigan lagu helo tacliinta waxa uu joognayaa sanadkan 2023 markaasi kadib ma dhaceyso in qof waxbarasho ku dalbado sharci.
Wixii Su’al ah way furanyihiin
Waxaa Qoray Caydaruus ( Cayga )
Asc waan idin salaamay bahda somaliska
Waxaan idin weydiinayaa su.aal ah anigu waxaan haystaa diamond mudo 9 sano ah waxan Sweden ku haystaa 3 ilmo ah shariah familiar ma khuseeya walaal